Rajaonah Andrianjaka, raha naneho hevitra tetsy amin’ny foibeny etsy Andravoahangy omaly. Efa nisy ny fangatahana napetrakay tamin’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina mba hametrahana fifanarahana amin’ny frantsay ny amin’ny hamerenan’izy ireo ny nosy malagasy. Mino aho fa tsy hampita izany ny filoha satria misoleladelaka amin’ny frantsay izy amin’izao fotoana izao. Tsy tiany hohelingelenina ity fihaonambe ity. Ny olana dia tsy mbola marisika ny hihetsika amin’izao fotoana izao ny vahoaka malagasy. Raha tsy diso aho dia misy antso ho amina hetsika atao eny Ivato amin’izao fotoana izao ho fitsenana ireo vahiny ho tonga eto. Tsara rehefa misy hetsika atao fa tokony hitambarana sy homanina. Ny hany vahaolana anefa dia tsy misy afa-tsy ny fidinan’ny vahoaka an-dalambe saingy tsy marisika izy ireo ka ny hany fanavotan-tenany dia ny fitsaram-bahoaka, hoy izy.